Iibhedi ezilingana nokumkani! Bonke ubunewunewu basekhaya!
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguAmi
Ngaphambi kokuhlala kwakho kweli khaya ijenereyitha ye-ozone iya kubaleka ukucoca ikhaya elibulala intsholongwane kunye neebhaktheriya. olu luhlaziyo lwakutsha nje esilwenzileyo ukuqinisekisa ukhuseleko ekulweni i-coronavirus. Eli khaya linegumbi lokulala eli-3 elinegumbi lokuhlambela eligcweleyo linayo yonke into oya kuyidinga ukuze uhlale ukonwabela. kukho i-65in ye-Smart TV kwigumbi lokuhlala ukuze uyonwabele, kukwakho ne-smart TV kwigumbi lokulala ngalinye. Ikhaya lihlaziywe mva nje zonke izinto ezintsha zentsimbi ekhitshini.
Ikhaya libekwe kwindawo ezolileyo kwidolophu encinci kwiyure nje enye emazantsi eChicago. Xa ufika uya kukonwabela ukusetyenziswa kwegaraji yeemoto ezi-2 njengoko ungena ekhaya. Igumbi lokuhlala liyamema kakhulu elinendawo yomlilo kunye nomnyango weglasi otyibilikayo ovulwe ngasemva kwipatio eneyadi entle yangasemva. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo nantoni na onokucinga ngayo ukonwabela ukupheka kwakho. Izixhobo zombane zintsha zonke. Kukwakho nembiza yekofu yeKeurig. Amagumbi okulala abanzi aneebhedi ezitofotofo kunye nendawo yokunxiba yakho. Igumbi lokulala elikhulu linebhafu epheleleyo. Kukho igumbi lokuhlamba impahla olisebenzisayo. Ngokuqinisekileyo uya konwabela iiTV ezi-4 ezintsha ezihlakaniphile ekhaya. Ukuhombisa kwi-ambiance yeli khaya ngokuqinisekileyo kuya kukunika indawo yokuphumla yokuza nokuhlala!
4.97 ·Izimvo eziyi-99
Uyakonwabela umoya wedolophu encinci kwaye ubekwe ngokufanelekileyo kanye kwindawo ephakathi kwe-57. Kufuphi kakhulu kwiYunivesithi yase-Olivet Nazarene kunye neManteno Veterans ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Ami
Njengomamkeli-zindwendwe ndikude nje neebhloko ezimbalwa ukuba ufuna nantoni na. Ndingafumaneka ngetekisi yefowuni okanye nge-imeyile nanini na okona kukulungeleyo.